Soo dejisan VMware Workstation 15.5.1.15018445 Player... – Vessoft
WindowsHorumarinEmulators & Mashiinka WaalidkaVMware Workstation
Bogga rasmiga ah: VMware Workstation
VMware Workstation – waa barnaamij awood leh oo la shaqeeya mashiinada farsamada. Barnaamijka wuxuu awood u leeyahay inuu abuuro mishiinka wacyiga ah iyadoo la koontaroolayo Windows, Mac, Linux iyo nidaamyada kale ee hawlgalka. VMware Workstation waxay awood u leeyihiin inay isku mar ka shaqeeyaan nidaamyo dhowr ah oo isku-dhafan oo, haddii loo baahdo, waxaa loo qaybin karaa shabakad wacyigalin ah. Software wuxuu awood u leeyahay inuu si madaxbannaan u dhigo tirada muhiimka ah ee qalabka processor, xaddiga hawlgalka iyo xusuusta sawirrada mashiinka farsamada. VMware Workstation waxay bixisaa baadhitaan nabadgelyo leh ee codsiyada shaki ama software ka baxsan halista si loo waxyeeleeyo nidaamka ugu weyn, iyaga oo ku dhex wata degaan-faneed gooni gooni ah.
Xayeysiinta nidaamyada ugu hawl badan
Calaamadaynta shabakada wanaajinta caadiga ah
Kala doorasho ballaaran oo lagu kala dooran karo
Soo dejisan VMware Workstation
Faallo ku saabsan VMware Workstation
VMware Workstation Xirfadaha la xiriira